OMA: Ọdịnaya Ntanetị na Usoro Ọdịdị Mgbapụta | Martech Zone
Wenezde, August 28, 2013 Tuesday, August 27, 2013 Douglas Karr
Nchịkọta Ahịa Organic (OMA) bụ Ọdịnaya Ntanetị na Usoro Ọdịdị nke ndị na-ere ahịa ahịa. Ngwa ahụ na-enyere ndị na-ere ahịa ọdịnaya aka ịhapụ "nsị nsị" gaa na mkpebi "data chụpụrụ" mgbe ha na-ewe ihe mgbu site na ịme ahịa ọdịnaya.
OMA na-enyere gị aka ịghọta ndị na-ege gị ntị nke ọma, na-eme ka ibipụta ọdịnaya dị mfe ma na-eme ka ọdịnaya gị nwee ọfụma. Na, OMA na-akpaghị aka ịchọta ma na-etinye saịtị dị egwu na ndị mmadụ n'ofe ọchụchọ, mmekọrịta mmadụ na ibe ya, blọọgụ, saịtị akụkọ, ọgbakọ na saịtị Q&A.
N'ụzọ bụ isi, OMA na-eme ka ọ dị mfe ịmezu ebumnuche azụmaahịa gị - ịkụziri ndị ahịa gị na ịkwọ ha ka ha gaa na weebụsaịtị gị. Yabụ, ịnwere ike ịchụpụkwu okporo ụzọ ma mepụta ROI siri ike maka mbọ gị… niile na obere oge.
Ndepụta Nhazi ngalaba
Key Akụkụ nke OMA
Keyword Research - OMA si isiokwu nnyocha ike na-enye ọtụtụ ụzọ chọta ezi Keywords iji nwaa gị oru ngo. E wezụga nchịkọta isiokwu nyocha, OMA pụrụ iche ọdịnaya gị na mkparịta ụka dị n'ahịa iji kpughee ohere isiokwu ndị ọzọ.
Nnyocha asọmpi - Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ozi ọ bụla dị na ikpo okwu nke dị maka saịtị gị ma na-agbasi mbọ ike maka ndị asọmpi. Nke a na-enye gị nghọta na-enweghị atụ n'ihe asọmpi gị na-eme. Site na mmekọrịta mmadụ na backlinks, ọchụchọ dị na ntanetị mgbasa ozi na itinye ego, OMA na-enyere gị aka kpughee otu ndị asọmpi si enweta nsonaazụ ma nyere gị aka ịba / merie ha.
Nchọpụta Nchọpụta Nchọpụta - Wuru n'ime OMA bụ ngwa ọrụ SEO. Site na njikarịcha n'Sitentanet, iji nyochaa azụlink, ịkwado nsuso na peeji nke njikwa na nsuso, OMA na-enye gị ihe niile ịchọrọ iji mee ka ọdịnaya gị dị elu.
Ntị na-ege ntị - OMA na-enyocha ọwa niile na netwọkụ mmekọrịta, ọbụlagodi blọọgụ, ọgbakọ na saịtị akụkọ maka isiokwu. OMA na-achọta hashtags a kpọtụrụ aha n'elu isiokwu gị. Na, site na nyochaa isiokwu anyị nwere ike ịchọpụta onye na-ekwu banyere ya kachasị na onye a na-ekwu maka ya. Maka aha ọ bụla anyị na-amata ma ọ bụ n'ime ọnọdụ dị mma / na-adịghị mma / na-anọpụ iche.
Nnyocha Mgbanwe - OMA na-achọpụta ma na-ekwu maka akara iji 20 + metrics chọta ndị nwere mmetụta dị egwu na niche ọ bụla. A na-akpado ndị ndu niile na akpaghị aka site na isiokwu na otu isiokwu maka nchọta dị mfe. Maka onye ọ bụla na-emetụta anyị, anyị na-achọta ozi kọntaktị site na saịtị ha na isi mmalite ndị ọzọ n'ịntanetị.
Nlekọta Ọrụ - Anyị na-agwakọta na ndị na-ahụ maka email nke ị nwere ike ịhụ ozi gị niile n'otu ebe. Dezie ndebiri email n'otu ebe. Nchịkwa ụdị CRM. Ikekọrịta kọntaktị nchekwa data maka ndị ọrụ niile n'ime ọrụ ọ bụla.
Nhazi oru na oru - n’ime akaụntụ ọ bụla ị nwere ike ịmepụta ọtụtụ ọrụ maka saịtị dị iche iche, ngwaahịa / ọrụ ma ọ bụ mkpọsa. Mepụta ma nye ndị ọrụ ndị ọzọ ọrụ n'ime ọrụ ahụ. Ekenye ikike iji hụ na nkewa ebe ọ dị mkpa.
Ricnye ọnụahịa bụ nnọọ asọmpi. N'ihi na Hubspot ndị ọrụ ha na-enye ohere ịnweta OMA maka $ 249 / ọnwa. Ha na-enyekwa atụmatụ ọdịnala maka enweghị uru na ndị ọzọ dabere na mkpa ụfọdụ.
Tags: AnalyticsNnyocha asọmpiNnyocha Mgbanwennyocha nyochaNchịkọta Ahịa OrganicNlekọta Ọrụnjikwa ọrụsearch engine njikarịchaAna-elekọta mmadụ na-ege ntịnjikwa ọrụ
Nye weebụsaịtị gị WordPress ụfọdụ na-enwu ọkụ
Nyochaa gị na mmemme mmekọrịta, mana echefula mgbalị gị SEO. I gaghi echefu ma, choo itule.